I ▷ AICOK Fryers bilaa Saliid ah ▷ Fikradaha iyo Qiimaha ugu Fiican
Fryer Saliida Aiok Free
Wali ma hubin midka ugu wanaagsan Fryer-ka Caafimaadka leh ee la iibsan karo? Ha ka maqnaan model cusub ee Aikok, calaamad caalami ah oo si weyn loo yaqaan. Shirkaddani ma aha mid aad u da' weyn, laakiin waxay leeyihiin buug-gacmeedyo ballaadhan alaabta guriga waxayna u muuqataa inay si fiican u socdaan.
Fryers Saliid La'aanta Ugu Fiican
Sidee buu u shaqeeyaa shiilan bilaa saliid ah?
Guud ahaan, alaabtoodu waxay leeyihiin Qiimaynta isticmaalaha wanaagsan, Laakiin waxaan diirada saari doonaa inaan falanqeyno AF-02B Air Fryer-kaaga, taas oo ah waxa halkaan kugu keenay. Sii wad akhrinta oo ogow wax kasta oo qalabkan yar uu ku siin karo markaad wax karinayso si ka caafimaad badan.
➤ Saliida Aiok Saliida Bilaashka ah
➤ Sidee buu u shaqeeyaa Fryer-ka Aiok Air Fryer?
➤ Dib u eegis ku saabsan Shiilan Saliida Bilaashka ah
➤ Gabagabada Mifreidorasinaceite
➤ Soo iibso Saliida Aicok Free Fryer
▷ Isbarbardhigga Vs Tartanka
Jadwalkan oo leh tilmaamaha ugu muhiimsan ee aad awoodid Is barbar dhig shiilan caafimaad qaba moodooyinka kale ee caanka ah ee suuqa.
Degdegga muhiimka ah ee CecoFry
Hawada Fryer HD9216
Makiinada weelka lagu dhaqo oo badbaado leh
Aan aragno waxa ay yihiin tilmaamaha ugu muhiimsan Qalabkan, Faa'iidooyinka ay bixiso, fikradaha ay qabaan isticmaalayaasha isku dayay iyo halka aan ka iibsan karno at qiimaha ugu fiican online. Aan tagno halkaas
▷ 3,2 litir
Fryer-ka Aicok Hot Air wuxuu leeyahay awood 3.2 Litir ah, taas oo ah ku habboon in lagu kariyo 4 ama 5 qof, sida uu sheegay calaamadda lafteeda. Cabbirku wuxuu ku dhex jiraa inta caadiga ah inta badan qalabka noocaan ah iyo Waxay ku habboon tahay lammaanaha iyo qoysaska intooda badan.
▷ 1300 W oo Awood ah
Marka la eego awoodda, Aiok AF-02B waxaa la siiyaa iska caabin ah 1300 watts. Iyadoo la tixgelinayo xajmiga iyo awoodda uu leeyahay. waa awood dheeli tiran. Iska caabintan waxaa nidaamiya a heerkulbeeg dijitaal ah, taas oo kuu ogolaanaysa inaad hagaajiso heerkulka u dhexeeya 80 iyo 200 degrees centigrade, sida qalabyo kale oo badan oo noocan oo kale ah.
▷ Nadiifin degdeg ah oo fudud
Ha ka werwerin nadaafadda, Aicok ma iloobin shaqada wasakhaysan waxayna ku qalabaysay weel iyo dambiil badbaado leh. Hadda waxaad kari kartaa adigoon ku shubmin ama qiiq xun oo aad illowdo xoqidda.
▷ Control Digital
Noocaan Aiok wuxuu ku qalabaysan yahay a shaashadda taabashada dhijitaalka ah oo leh waqti iyo tilmaame heerkulka. Laga soo bilaabo guddigan kantaroolka waxaan awoodnaa dooro heerkulka iyo saacadda ilaa 60 daqiiqo.
Waxa kale oo ay leedahay badhanka xusuusta iyo joojinta, kaas oo u ogolow dambiisha in laga saaro inta lagu jiro diyaarinta si loo hubiyo cuntada ama lagu daro xawaash. Qeybta kontoroolka waxaa ku yaal xariir-baaran talooyinka leh waqtiyada saxda ah iyo heerkulka cunto kasta.
▷ Naqshadaynta iyo Dhismaha
Aicok waxaa lagu heli karaa madow, oo leh naqshad aad u qaabaysan. casri ah oo aad u kooban, ku fadhiistay caag aan sibiq lahayn. Dusha sare ee qalabku waxa uu ka samaysan yahay balaastiig, tan iyo gacanteeduna waa qabow marka la taabto. model Tani sidoo kale Waxay leedahay gariiradda fiilada ku dhisan ee la taaban karo.
Miisaanka 4,2Kgrs - Cabirka: 25 x 31 x 32 cm
Shiiliyaha hawada dhijitaalka ah ee Aiok waxaa ku jira dammaanad 2 sano ah, ugu yar ee lagu dejiyay sharciga Spain.
Ma dhihi karno qiimaha lagu taliyey waa raqiis, maadaama uu yahay 159,99 euro. Si kastaba ha ahaatee inta badan waxay leeyihiin qiimo dhimis ilaa 50%, taas oo ka dhigaysa doorasho dhab ah oo dhaqaale.
Haddii aad rabto inaad aragto qiimaha la cusboonaysiiyay ee la heli karo, kaliya waa inaad gujisaa badhanka moodeelka oo aad jeceshahay. Shirkaddu waxa kale oo ay haysataa nooc kale oo ka fudud oo ka jaban kaas oo ah kan ugu iibka badan oo aad ka arki karto xidhiidhkan:
Princess 182727 Deep Mashiinka ...
Princess 182020 Deep Mashiinka ...
Muuqaalkan waxaad ka arki kartaa iyada oo ficil ku jirta. karinta saxan shiilan digaag si fudud oo nadiif ah.
Habkani wuxuu weli leeyahay waqti gaaban suuqa, inkastoo wuxuu leeyahay fikrado qaar, dhammaantoodna way wanaagsan yihiin. Intaa waxaa dheer, noocii hore ee astaanta ayaa si fiican u iibiyey, wuxuuna lahaa 4.1 ka mid ah 5 qoraallada iibsadayaasha Amazon Spain.
Haddii aad rabto in aad ku karsato saliid yar, 80% ka yar ku xiran tahay brand, model this of Aikok waxay u noqon kartaa door fiican gurigaaga. Inkasta oo ay tahay calaamad yar oo caan ah oo Spain ah, waxay u muuqataa in guud ahaan isticmaalayaashu way ku qanacsan yihiin alaabtooda.
Qiimaha ayaa la socda moodooyinka la midka ah ee noocyada kale ee caanka ah, laakiin qiimo dhimista caadiga ah waxay noogu muuqataa doorasho ka sii fiican.
Xakamaynta Dijital ah
Nadiifi, Fudud oo Wax ku ool ah
Calaamad yar oo la yaqaan
Aag cunto karinta
Ma Kicin Cunto
Miyaadan arki karin cuntada
Waxaa laga yaabaa inaad xiisaynayso: Vpcok shiilan
▷ Su'aalaha Inta badan La Isweydiiyo
Ma haysaa barnaamij la duubay? Ma laha barnaamijyo la xifdiyay, waana inaad doorataa halbeegyada sida ku cad cuntada.
Ma haysaa buug cunto karinta lagu daray? Habkani ma laha buug cunto karinta
Maxaa suxuunta lagu samayn karaa? Sida noocyada kale, waxaad dubi kartaa, duban kartaa oo shiili kartaa hilibka, kalluunka, khudaarta, macmacaanka, iwm.
Ma tahay inaad kiciso cuntada? Si loo helo natiijooyin wanaagsan waa inaad joojisaa oo walaaq cuntada kala badh inta lagu jiro diyaarinta.
Waxaan horay u aragnay dhammaan faahfaahinta model this, Haddii ay ku qancisay oo aad rabto inaad hesho, waad ka samayn kartaa halkan.
Guji si aad u qiimeyso gelitaan
(Codadka: 10 Celcelis: 4.4)
⭐ Fryer Saliid la'aan ah » Fryer Saliida Aiok Free
2 Comments on "Aicok Oil Fryer Free"
26 / 03 / 2020 at 14: 18
Waxaan haystaa shiilan qoto dheer oo aan saliid lahayn
shaqo. Dambiishii gudaha ayaa daxalisay. Halkeen ka heli karaa qaybta firaaqada ama taleefanka guriga si aan u dalbado?
Waxaan ka iibsaday amazon ka dib markii ay sheegteen waxay ii soo direen aqalkii amiirada. Shabag ma laha
25 / 04 / 2020 at 19: 33
Hello, waa dhibaatada iibsashada noocyada noocaan ah, waana sababta aan kugula talineyno inaad doorato kuwa leh SAT. Waa inaad la dagaalanto amazon. Nasiib